Tora-pasika miboridana ao Costa Brava | News Travel
Tora-pasika miboridana ao Costa Brava
Mariela Carril | 19/04/2022 17:00 | España, tora-pasika
Avy any Blanes, any Espaina, ka hatrany Portbou, eo amin’ny sisin-tanin’i Frantsa, ilay antsoina hoe Costa Brava, sisin-dranomasina mirefy 214 kilometatra manaitra noho ny hatsaran-tarehiny mikitoantoana sy bibidia. Manaraka io morontsiraka io dia misy valan-javaboary, nosy, tora-pasika, coves ary tanàna tsara tarehy izay manintona mpizaha tany maro ankehitriny.
Amin'ireo mpizahatany ireo dia misy foana ny sasany tia mandehandeha rehefa nentin'ny reniny teto amin'izao tontolo izao izy ireo, ka afaka miresaka momba ny Costa Brava tora-pasika miboridana. Soraty izy ireo amin'ity fahavaratra ity!
3 Cove mpilalao
5 Ny Nosy Mena
El nudism na naturalism, na dia ampiasaina amin'ny teny mitovy aza izy ireo, dia tsy mitovy izy ireo, fa fomba fanao mifandraika amin'ny fahalalahan'ny vatana sy ny tontolo iainana. Tsy zavatra nampiharina be tany Espaina ny Nudism, fa nitombo ny lazany nandritra ny fotoana elaela ary, na dia tsy izany aza no zavatra mahazatra indrindra amin'ny ankamaroan'ny tora-pasika Katalana, dia misy torapasika Mediteraneana lasa paradisa manokana.
Marina koa fa avy amin'ny Ny fahafatesan'i Franco Tamin'ny taona 70, maro tamin'ireo Espaniola nandeha tany atsimon'i Frantsa mba handeha mitanjaka no nanomboka nanao izany teo amin'ny taniny, ary tamin'izany fomba izany, tany amin'ny morontsirak'i Katalana, dia nanomboka nibodo tany ny nudista. A) Eny, ankehitriny dia misy tora-pasika miboridana 20 mahery ao Costa Brava.
Io no tora-pasika miboridana indrindra ao amin'ny faritra Baix Empordà. Fasika tsara kalitao, sisin-dranomasina mivelatra tanteraka mianatsimo ary misy vato roa manatona ny atsimo sy avaratra, ka misy ny fiainana manokana ho an’izay misafidy azy.
Amin'ity morontsiraka ity afaka tonga avy any an-dranomasina na avy eny an-dalana ianao, lalana miafara amin'ny esplanade eo amoron-dranomasina. Ny fiantsonan'ny fiara dia 6 euros. Avy amin'ny fonenan'i Rosamar dia misy lalana mankany amoron-dranomasina. Raha tsy te-handoa ny 6 euros ianao dia afaka mamela maimaim-poana ny fiaranao eny an-tampony fa tsy dia mahafinaritra loatra ny miakatra be rehefa tapitra ny andro lava eny amoron-dranomasina.
Ny tora-pasika dia mifandray amin'ny sivilizasiona amin'ny lalana somary sarotra izay mizotra eo anelanelan'i Tossa sy San Feliu de Guixols, fa raha mitondra ny elo sy ny sakafonao ianao dia hanana fotoana mahafinaritra.
Tsy maintsy mankany amin'ny tilikambo Cap de Creus avy any Cadaqués eny an-dalana ianao. Indray mandeha eto dia tsy maintsy mandeha eny amin'ny renirano maina ianao, kajy mandritra ny antsasak'adiny, mandra-pahatonganao any amin'ny toerana misy kirihitra malefaka, mifanohitra amin'ny zavatra hitanao matetika amin'ny sisa amin'ny morontsiraka mikitoantoana. Ny tora-pasika dia mandray anao amin'ny ampahany amin'ny ranomasina izay voaaro amin'ny rivotra mahery ary noho izany dia mitazona ny rano ho tony sy mangarahara.
Tena tsara tarehy ity tora-pasika ity, misy maro Fiainana an-dranomasina ao amin’ireo rano ireo, ary misy olona matory amin’ny alina fahavaratra. Mahagaga.
Misy vato misakana an’i Cap de Creus ka manamarika ny ilany atsinanana indrindra amin’ny Saikinosy Iberiana sy ny faritra midadasika indrindra amin’ny Costa Brava. Iray amin'ireo tsiambaratelon'ity toerana ity ny Cala Tavallera, eo amin'ny 2 kilometatra miala an'i Port de la Selva y tsy misy afa-tsy ny GR11, lalan-tongotra izay mampifandray ny Mediterane sy ny Atlantika.
Mety ho vakianao fa azo aleha ihany koa ny fiara 4x4, fa ny lalana azo antoka indrindra hahatongavana any dia ny mandeha an-tongotra adiny roa. Ny tanjona dia mendrika izany rehetra izany: cove aiza amin'ny fahavaratra zara raha misy olona ary amin'ny ririnina, tsy misy olona. Misy fialofana ahafahanao matory ary diniho ny filentehan'ny masoandro sy ny fiposahan'ny masoandro. Zavatra tsara hojerena.
Mety ho amin'ny haavon'ny vanin-taona mafana dia tonga ny sambo kely ary mijanona mandritra ny ora vitsivitsy, saingy amin'ny vanim-potoana sy ivelan'ny vanim-potoanan'ny taona dia sarotra ny mahita olona.
Ny Nosy Mena
About the tora-pasika miboridana ihany ao amin'ny faritra afovoan'i Costa Brava. Tora-pasika mena lalina izy io, ny vato mipoitra avy ao amin'ny helodrano dia zavatra mahavariana sy hafahafa, miaraka amin'ny endriny semicircular izay mamorona tora-pasika manjavozavo sy manasa.
Mba hahatongavana any dia mila mandeha an-tongotra kely avy ao Camí de Ronda ianao, manaraka ny lalana amoron-tsiraka. Tsy misy olona, ​​tsy misy barazy amoron-dranomasina. Mazava ho azy fa aorian'ny mitataovovonana dia misy alokaloka be dia be, noho ireo vato goavam-be miaro azy ireo indrindra.
Ny faritra Baix Empordà dia manana Cala Estreta, a tora-pasika maotina izay mandrara ny fahatongavan'ny fiara amin'ny fahavaratra. Izany dia mahatonga ny eny na eny tsy maintsy ataonao mandeha 45 minitra eo ho eo avy any amin'ny tora-pasika Castell, manaraka ny lalana Camí de Ronda na raha manaraka ny lalan'ny serivisy ianao dia mandeha an-tongotra 20 minitra kokoa. mandalo mivantana eo ambanin'ny tilikambo elektrika ao amin'ny toeram-piantsonan'i Castell io lalana io.
Saingy mendrika ny ezaka satria ny natiora dia manome antsika andian-tsambo tsara tarehy izay mamela ny nudism ary misokatra miantsinanana izy ireo mba hankafiziny ny marainan’ny masoandro tsara tarehy ary ny masoandro mijanona mandra-pahavaratra.
Ny tora-pasika dia mijanona ho tony na latsaka noho ny dia an-tongotra tsy maintsy atao mba hahatongavana any.
Tora-pasika lavitry ny vahoaka madingana izy io. Tsy misy trano fa ny natiora ihany. Mba hahatongavana any dia tsy maintsy mitondra fiara amin'ny lalana mampitohy an'i Sant Feliu de Guíxols sy Tossa de Mar ianao, miaraka amin'ny fihodinana 350 mahery, ary tandremo ny famantarana izay manondro ny fiandohan'ny lalana midina.
Mijanona eo amoron-dalana ny fiara ary avy eo dia midina anaty ala ny lalana ka aza manao kiraro tsy mahazo aina. Na dia amin'ny tapaky ny volana aogositra aza dia tsy hahita olona mihoatra ny roa na telo ianao amin'ity tora-pasika vatokely tsara tarehy tsy mihoatra ny 200 metatra.
ny tora-pasika dia nudist, mangina, tsy misy fety na inona na serivisy na inona na inona. Soa ihany fa voatazona tsara izy io, noho ny andraikitry ny mpitsidika.
Ao amin'ny Castell dia mbola misy toerana virjiny sasany ary trano roa no hita, mianavaratra sy mianatsimo, izay notsidihan'ny sasany tamin'izy ireo. Salvador Dali sy Martin Dietrich. Avy any Palafrugell no ahatongavana eto, nandoa parking ary tsara satria io vola io no averina amin'ny fikarakarana ny faritra.
Hahita ny reniranon'i Aubí ianao, miaraka amin'ny ganagana sy ny zava-drehetra, afaka mihinana eo ambanin'ny hazo kesika voaaro amin'ny masoandro ianao, mandehandeha any anaty ala, mijery ny tranon'i Dalí ary mandeha eny amin'ireo zohy very. Amin'ny fahavaratra dia misy trano fidiovana ary afaka manofa kayak.
Amin'ity morontsiraka ity Afaka mandeha an-tongotra avy any Cadaqués ianao, ankoatra ny hafa, izay kilometatra vitsivitsy miala. Teny an-dalana dia hahita fHoop tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny tilikambo Catalans, izay ahitanao fijery mahafinaritra ny Port Lligat sy Cadaqués mihitsy.
Cala Nans somary lavitry ny vohitra izy io na toeram-ponenana ka mijanona ho tsy simba. Vita amin'ny vato izy io ary misy lavaka manodidina azy mba ho very kely.
Any amin'ny faritra antsoina hoe La Selva izy io, eo amin'ny sisin'ny tanànan'i Lloret de Mar. Ny fasika dia matevina ary tokony ho 250 metatra eo ho eo. Izy io dia manana serivisy fanaraha-maso sy famonjena, trano fisotroana, fandroana ary izany Sainan'ny manga.
Mizara roa izy io, ny Sa Roca des Mig. Ny antsasany no antsoina Sa Cova ary ny iray hafa Sa Boadella, fa ny voalohany no be atao indrindra ary eo amin'ny ilany havanana no aiza afaka manao nudism ianao.
Ity tora-pasika miboridana ity dia iray amin'ireo tora-pasika tsara indrindra any Costa Brava, lavitra ny foibe fizahan-tany amin'ny faritra. dia misy fito kilometatra eo ho eo avy eo Rosas, avelao eny ambony ny fiara ary mandehana amin'ny lalana tsy misy rarivato. Tokony ho 20 minitra eo ho eo ny fidinana, saingy tsy sarotra mihitsy.
avy ny tora-pasika shingle, tsy misy fasika, ka ny kiraro dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fandehanana milamina. Ny tora-pasika Manodidina ny 150 metatra eo ho eo ny halavany ary matetika dia vitsy ny olona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Tora-pasika miboridana ao Costa Brava
Aiza no ahafahanao mametraka moto
Inona no ilaiko handehanana any Londres